चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत – मुलधार न्युज
Home > समाचार > चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत
२६ बैशाख २०७५, बुधबार १७:१७
२६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ लाई संसदले स्वीकृत गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिन गरेको प्रस्तावलाई बुधबारको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका हुन् ।
विधेयकको विपक्षमा सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ क्याम्पस खोल्न नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले मेडिकल शिक्षालाई कुनै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा सीमित नगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा स्थापना गर्ने गरी अध्यादेश व्यवस्था गरिएको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसी पटक पटक अनशन बस्दै आएका थिए । उनको माग पूरा गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा सरकारले केही दिनअघि फेरि अत्यादेश ल्याएको थियो ।
संसद बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।
सारा संसारलाई थाहा छ, म नेपाली हुँ -उदित नारायण झा
प्रहरी अधिकृतलाई बञ्जीजम्प अनिवार्य
पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव मगर जीप दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते !!!
चीनले नेपाललार्इ दिँदै आएको शैन्य सहायता ५० प्रतिशत ले बढायो
‘जुनकिरी’ हेरेर हमालले गरे प्रशंसा